Japana: Mikisaka any atsimo ny horohorontany? Matahotra i Kansai · Global Voices teny Malagasy
Japana: Mikisaka any atsimo ny horohorontany? Matahotra i Kansai
Voadika ny 19 Marsa 2011 10:43 GMT
Anisan'ireo lahatsoratra manokana mikasika ny horohorontany tany Japana 2011 ity lahatsoratra ity.
Andro vitsivitsy aty aorian'ny horohorontany goavana namely ny faritra avaratra andrefan'i Japana dia mbola mitohy mihetsika hatrany ny tany any amin'ireo faritra hafa ao amin'ny nosy Honshu. Raha jerena indray mitopi-maso ny Yomiuri Shimbun momba ny vaovaon'ny horohorontany , dia hita fa nihetsika ny tany ka nahatratra 6 tamin'ny fandrefesana ny fihovitry ny tany ary namely ny faritr'i Shizuoka (teo anelanelan'ny tanànan'i Tokyo sy Kansai) tamin'ny 10 ora sy sasany maraina tamin'ny 15 martsa. Fanampin'izay, tokony ho tamin'ny 3 ora sy sasany maraina ny 16 martsa, horohorontany nahatratra 4 tamin'ny fandrefesana no namely an'i Hida-Takayama tanàna iray ao amin'ny faritry Gifu , ao avaratra antsinanan'i Shizuoka. Mazava ho azy fa niteraka tsy fitoniana teo amin'ny mponina mipetraka any amin'ny ilany antsinanana izany fihetsehan'ny tany nifanesisesy izany.
Jereo eto amin'ny sarintany goavana
Tamin'ireo dingana ireo dia tsy nisy akory ny fampiomanana amin'ny tsunami na resaka fitaovana mpamorona herinaratra nokleary tany ivelan'ny faritr'i Tohoko, kanefa ny mpiserasera twitter ao Kansai, faritra lehibe indrindra ao amin'ny ilany atsimon'ny nosy Honshu, no manahy be ihany. Indreto santionany amin'ny tweets notsongaina tamin'ny maranan'ny 16 martsa.
Raha namely an'i Shizuoka ny horohorontany tamin'ny alina, dia nanamarika ny vadiko: “Mety hipoaka ve ny tendrombohitra Fuji, huh?” ka nahatonga ahy tsy hahazo aina mihitsy. Ny zavatra voalohany tao an-dohako, “amin'izany fahenoako azy izany dia mizotra mankany Kansai izy”, ary raha hadihadihana ny manodidina ny zava-misy dia nahazoany izao tsoa-kevitra izao, “tsy isalasalana fa hijanona manodidina an'i Itoigawa izany, na angamba hizara manaraka an'i FossaMagna i Japana”, nanapa-kevitra aho fa tsaratsara kokoa raha mandany andro milalao amin'ny saka.
@althis_asuka: 食料品とか買い込みする人がいなきゃ今まで通りが可能。それが関東や関西です(茨城さんだけちょっと凄い大変そうですが）。そもそも水道ひねって→飲める水が出る　って事そのものが世界的に恵まれてる→この大地震後でも世界的に恵まれてますからね。自覚すれば余裕が有ります
Rehefa tsy mividy sakafo sy ny ohatr'izany ny olona dia mitovy amin'ny mahazatra ihany ny zavatra rehetra eto. Tokony ho ao amin'ny manodidina an'i Kansai sy Kanto izao (na dia ohatry ny hoe sarotra ho an'ny mponina ao Ibaraki aza). Na izany na tsy izany, rehefa ahodina ny fantsona dia mbola mandeha aloha ny rano fisotro madio – manam-bitana isika satria manana loharano namboarina, ary afaka ampiasaina tsara na dia aorian'ny horohorontany aza. Eo am-pahitana izany dia tsapa fa mbola miaina tsara isika .
Mikisaka mianatsimo mihazo an'i Myiagi mandalo an'i Tokyo Bay ao amin'ny faritr'i Shizuoka izany ny horohorontany… Manontany tena aho hoe efa miomana ho amin'izany ve izao ny mponina ao Kansai?
@axexlll: 今度は岐阜県か…だんだん地震南下してきてる？ 余震が続いてる所もそうだけど、きてない関西とかもいつ来るかわからないから寝れないなぁ
Ao amin'ny faritry Gifu izy izao…mikisaka any atsimo ve izany ny fihetsehan'ny tany? mazava ho azy fa misy teboka hiatrehana ny tahotra amin'ny horohorontany misesisesy tahaka izao, kanefa mbola tsy nampiharina tao Kansai izany, tsy mahita tory aho rehefa mieritreritra hoe ho lasa tahaka ny fitokonana izy ity…
Heveriko aloha raha ny marina, raha vao mieritreritra fotsiny hoe: “horohorontany goavana hamely an'i Kansai?” dia midobodoboka be ny foko tahaka ny ho vakin'ny tahotra. Ohatry ny efa maminavina zavatra hafa aho toy hoe lasa menamena ny lanitra any antsinanana, na koa akaiky kely ny volana… na dia eo aza ny mpilaza ny ho avy tsy manana toby siantifika. tsapako ihany fa tsy hiaina mihitsy aho raha mieritreritra tahaka izany, dia miezaka aho hanana fanantenana araka izay azoko atao. Tahaka ny fahamaizana hahatratra ny lohataona voalohany…
Eo am-pamakiana ny tweets ao amin'ny faritra, na dia tsy misy aza ny pitsopitsony mazava momba ny risika hahazo an'i Kansai, dia tsy mahazo aina foana. Soa ihany fa mazava tsara ny hevitry ny mpiserasera maro ary miezaka manao toy izany koa ny hafa.
Ny zavatra tsapako raha vao miresaka horohorontany dia hoe… aza miserasera tweet aloha! Amin'ny fotoana tahaka izao, ny zavatra tena ilaina dia ny fitoniana. Raha vao misy tweets diso fotsiny miparitaka dia azo antoka fa tsy ho tsara izany, kanefa inona no hiseho miaraka amin'ny fitaomana tany tsy miasa sy sary? Aleo isika eto Kansai hijery ireo namantsika any Tokyo.
@b sk063: imailaka avy amin'ny namako iray ka ny loharanom-baovao nahazoany azy dia ny vaovao ao amin'ny fahitalavitra: “manatona ny faritr'i Shizuoka ny horohorontany… ohatry ny ho voakasika ve i Kansai, sa tsy izany?” Miahiahy tsy mahita tory… dia ahoana izao no momba ireo fitaovana mpamokatra herinaratra nokleary?” Mandray an-tendrony fotsiny ny media huh…ohatry ny twitter, izay mampifandanja tsara ny vaovao misy amin'ny voalazan'ny any ivelany izay tena ilaina tokoa.
Mandritra izany rehetra izany dia toa misy fanantenana ihany ao Kansai, satria i Makato Yagi, filohan'ny KEPCO (Orinasa Mpamokatra Herinaratra ao Kansai) no nanambara ny fanirinay handray fanapahan-kevitra hentitra hisakanana izay mety ho fipoahana nokleary avy ao Kansai:
@RepublicofOsaka: misy ny fahavononan'ny KEPCO hanamafy ny fiarovana ny toby nokleary amin'ny horohorontany sy ny tsunami: taorian'ny horohorontany namely mafy ny ilany avaratra andrefan'i Japana, sy ny resaka manodidina ny toby nokleary Fukushima 1, dia nanambara ny KEPCO fa hanamafy ny fiatrehany ny mety ho horohorontany na tsunami any amin'ny faritra misy azy.